Colaada Tigray - Wikipedia
Goobta Gobolka Tigray ee Itoobiya
Colaada Tigray waa isku dhac hubaysan oo socda kaas oo kabilaabmay Nofeembar 2020 Gobolka Tigreega ee Itoobiya, unadhaxeeya ciidamada gaarka ah ee Gobolka Tigreega oo ay hogaaminayaan Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega (TPLF), iyo Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya (ENDF) ee isbahaysiga la leh Amxaarada. Ciidamada gaarka ah ee gobolka.
Isku dhacu wuxuu kululaaday markii Raiisel Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu isku dayay inuu ka fogeeyo siyaasada wadanka ka jirta federalismka qowmiyadaha, oo ah nidaam awood qeybsi ah oo saamayn goboleed siiya qoomiyadaha shakhsiyaadka ah, isaga oo mideeyay xisbiyada ku abtirsada deegaanka iyo gobolka ee Jabhadda Dimuqraadiga Dadweynaha Itoobiya. kaasoo 30 sano xukumayay Ethiopia, kana dhigay xisbi barwaaqo dalka oo dhan.
Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray, oo ah millateri iyo awood siyaasadeed oo xoog leh gudaha Itoobiya oo mataleysa 6% tirada guud ee dadka ku abtirsada, ayaa diiday inuu ku biiro xisbiga cusub, waxayna ku andacooday in Abiy Ahmed uu noqday taliye sharci-darro ah isaga oo dib u dhigay jadwalka doorashooyinka guud ee loo qorsheeyay 29 Ogosto 2020 taariikh aan la cayimin 2021-ka sababtuna tahay COVID-19.
Kooxda TPLF ayaa kubilaabtay doorashooyinkii gobalada Tigreega bishii Sebtember 2020 iyagoo diidan dawlada dhexe oo sharci daro ku tilmaamtay doorashadii Tigray.
Xaaladda ayaa isku bedeshay rabshado 4tii Nofeembar iyada oo lagu eedeeyay weerar Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray ay ku qaadday Xarunta Taliska Woqooyi ee Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya. Weeraro gantaalo ah ayaa ku daatay gobolka Axmaarada ee deriska la ah iyo wadanka Ereteriya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Colaada_Tigray&oldid=207111"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Nofeembar 2020, marka ee eheed 10:29.